Web Service - Arambha Technology
In Arambha Technology, the customer can get the all kind of the web and software support. In this organization customer can get the services like; domain registration, web hosting and website development. Besides of this services the organization will also give support in the software development.
यस अारम्भ टेक्नाेलाेजीमा ग्राहक वर्गले वेव तथा सफ्टवेयर सम्बन्धी बिभिन्न सेवाहरू प्राप्त गर्नेछन् । यस संस्था भित्र डाेमेन रजिष्ट्रेशन, वेव हाेस्टिङ एवम् सफ्टवेयर डेभलाेपमेन्ट जस्ता कार्यहरू पनि गरिन्छ ।
सर्वप्रथम हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के हाे भने, हाम्राे व्यापार/व्यवसायलाई स्थानीयबाट क्षेत्रीय, राष्ट्रिय एवम् अन्तरास्ट्रिय स्तरमा चिनाउन वेबसाइटले मद्दत गर्छ । यसका लागि वेवसाइटलाइ स्तरीय बनाउन जरूरी हुन्छ । यसका लागि वेवसाइटमा भएका कुराहरू अरू वेवसाइटबाट हुबहु सारिनु हुदैन । वेवसाइटलाइ प्रभावकारी बनाउनका लागि बेला बेलामा वेवसाइटकाे प्रभावकारीता जाँच गरिरहनुपर्दछ । जसका लागि गुगलमा google business, google analytics र google search console मा वेवसाइटलाइ पनि जाेड्नु पर्दछ । वेवसाइटलाइ बढी महत्वका साथ facebook, twitter का साथै अन्य social media हरूमा प्रचार गर्नुपर्दछ । आजको यस समयमा प्राय जसाे सबैकाे हात हातमा स्मार्ट फाेन हुने गर्दछ । तसर्थ हामीले हाम्राे वेवसाइटमा सकेसम्म सबैजसाे महत्वपूर्ण कुराहरू समेटेर राख्नुपर्दछ । एक पटक वेवसाइट बनाइसकेपछि बर्षाैबर्षसम्म केही नगरी बस्दा वेवसाइटकाे उपयाेगीताका बारेमा गलत धारणा सृजना हुन सक्छ । त्यसैले वेवसाइट बनाउदा भविष्य सम्म त्यसका लागि गरिने कार्यहरू साेचेर अघि बढ्दा राम्राे हुन्छ ।
सामान्यतया एउटा वेवसाइट बनाएपछि शुरूमा आफ्नो वेवसाइट सुहाउदाे domain खाेज्नुपर्दछ । नेपालकाे हकमा पछाडी .np राखिएकाे र नराखिएकाे वेवसाइट बढी प्रचलित छन् । जसमध्ये .np पछाडी रहेका वेवसाइटकाे domain निशुल्क प्राप्त गर्न सकिन्छ, त्यसका लागि register.com.np मा गएर आवश्यक document हरू submit गरेर पाउन सकिन्छ भने पछाडी .np नभएका domain हरूकाे लागि बार्षिक रूपमा शुल्क तिर्नुपर्ने हुन्छ ।
तत्पश्चात हाम्राे अन्तिम काम भनेेकाे वेवसाइट बनाएर सबैले देख्ने गरी publish गर्ने हुन्छ। यसका लागि दक्ष web developer काे सहायताले कार्य सम्पन्न गरिन्छ । यसमा पनि हामीले पारिश्रमिक शुल्क छुट्याउनु पर्ने हुन्छ र अर्काे बर्ष हामीले सहमतिमा वेवसाइट बनाउने कम्पनी वा व्यक्तिलाइ सेवा शुल्क दिनुपर्ने हुन्छ । तर कहिलेकाही सेवा शुल्क नलिने सहमति गरेर काम अघि बढाउन पनि सकिन्छ । साथै .np नभएकाे domain र hosting space प्रत्येक बर्ष renew गर्नुपर्दछ ।
के तपाइको कम्प्युटर/ल्यापटपमा विभिन्न समस्याहरु आएका छन् ?, जस्तै:
✅ कम्प्युटर/ल्यापटप खुल्दै खुल्दैन ।
✅ कम्प्युटर/ल्यापटप खुल्छ तर धेरै ढिला ।
✅ कम्प्युटर/ल्यापटप restart भईरहन्छ ।
✅ इन्टरनेट ढिला चल्छ ।
✅ प्रिन्टरले प्रिन्ट गर्दैन ।
✅ Blue Screen of Death आइरहन्छ।
✅ कम्प्युटर बेला बेलामा अड्रकिरहन्छ ।
✅ कसैले कम्प्युटर मर्मत गर्ने भनेर hard disk नै format गरिदियो, जसमा धेरै महत्वपुर्ण file हरू थिए ।
यी यस्तै समस्याहरू तपाईका पनि छन् भने हामीलाइ सम्पर्क गर्नुहोस् ।
साथै सस्ताेमा वेवसाइट बनाउन चाहनुहुन्छ भने पनि हामीलाइ सम्पर्क गर्नुहाेस् ।
✅1 GB Disk Space
✅10 GB Bandwidth
✅10 Emails associated with domain
मात्र रू. ५०००/-, बिस्तृत जानकारीकाे लागि हामीलाइ सम्पर्क गर्नुहाेस् ।
🕙🏃‍♂️🏃‍♀️छिटो गर्नुहोस है, यी याेजनाहरू आश्विन मसान्त सम्म लागु हुनेछ ।🏃‍♂️🏃‍♀️🕙
बिस्तृत जानकारीका लागि हाम्राे आधिकारिक वेबसाईट लग अन गर्नुहाेस् ।
कुनै जिज्ञासा भएमा हामीलाई सम्पर्क☎️📧 गर्नुहोला ।
हामीलाई हाम्रो फसबूक पेजमा पनि आफ्नो कुरा सोध्न सक्नुहुनेछ ।
Facebook page: facebook.com/arambhatechnology
कम्प्युटर सम्बन्धी बिबिध भिडियाे हेर्नकाे लागिः https://www.youtube.com/channel/UCHbTruS4ZH6dtSFg3v6ezsg
स्वस्थ्य रहनुहाेस्, सुरक्षित रहनुहाेस् ।